इतिहासको गौरवगाथा हो ने.वी.संघ – Vision Khabar
इतिहासको गौरवगाथा हो ने.वी.संघ
। १५ पुष २०७५, आईतवार २१:३२ मा प्रकाशित
हामी यतिवेला नेपाल विद्यार्थी संघको १२ औँ महाधिवेशनको पूर्व सन्ध्यामा छौ । देशैभरका जील्लाहरुमा र जील्लाका क्याम्पसहरुमा धमाधम अधिवेशन भैरहेका छन्।
नेपाल विद्यार्थी संघको अधिवेशनको सरगर्मी चलिरहदा विगतका दिनहरुमाझै यसपाली पनि अधिवेशन हुदैनकी भन्ने अन्यौलता पनि जीवीतै छ । यदि अधिवेशन भैहालेमा यसपाली ३२ वर्षे उमेर हदबन्दी लागेर हुदैछ । देशैभरवाट ३२ वर्ष मूनीका मात्रै विद्यार्थीहरुले भाग लिनेछन् । उमेर हदवन्दी लाग्दैगर्दा नेपाल विद्यार्थी संघमा लामो समय देखि निरन्तर काम गरिरहेका संघर्ष गरेका धेरै उर्जावान शक्तिहरु वाहिरीने छन् । भने ३२ बर्ष मुनिका आम विद्यार्थीहरुको तप्कालाई भाग्यमानी पूस्ताको रुपमा ठानिएको छ । यी विविध अनुमान, सवालहरुको विचमा महाधिवेशन हाम्रो पहिलो शर्त बन्नु पर्दछ । महाधिवेशननै सबै कुराको निकाश हो । महाधिवेशननै महाधिवेशनको विकल्प हो, भन्ने कुरालाई सर्वत्र मूल मन्त्रको रुपमा लिईनु पर्दछ ।
अन्यौलताको बिचमा भए पनी नेपाल विद्यार्थी संघ अधिवेशन उन्मूख भैरहदा हाम्रो जील्ला जाजरकोट पनि अधिवेशनको ढोकामै पुगेको छ । जील्ला अधिवेशनका लागि हाम्रो ऐतिहासिक दिनका रुपमा लिईने दिन “पूस १६” अर्थात राष्ट्रीय एकता तथा मेलमिलाप दिवसको दिन तय गरिएको छ । यसलाई सुखद संयोगका रुपमा लिनुपर्छ । जाजरकोट जील्लाको अधिवेशनको उद्घाटन पौस १६ जस्तो ऐतिहासिक दिनमानै हुनुले सर्वसम्मतीवाटै नेतृत्व छनोट हुनेछ भन्ने कुराको विश्वास राख्न सकिन्छ ।
नेपाल विद्यार्थी संघले सोचे जस्तो ढंगले गती प्रदान गर्न सकीरहको छैन । समयमा अधिवेशन हुदैन । जील्लामा संगठन छैन । जील्लाका प्राय नेतृत्वहरु स्कुल र क्याम्पसमा संगठन गर्न छोडेर राजधानीमा सयर गर्न मस्त छन्। नेताहरुको चाकडी गर्न व्यस्त छन्। गाउँमा संगठन छैन । विद्यालय संगठन विहीन छ । क्याम्पस संगठन विहीन छ । जील्लाको कार्य समिति चलायमान छैन । यी सबै गतल प्रवृतिका विरुद्ध मूख खोलेर वोल्न सक्ने आँट पनि कसैसँग छैन । न त समिक्षा नै छ ।
हुनत नेपाल विद्यार्थी संघ गर्विलो ईतीहास बोकेको संगठन हो । हाम्रा सामू ईतीहास जीवित छ । यो जीवीत ईतिहासको स्मरण गर्दैगर्दा ने.वी. संघले आफ्नो स्थापनाकाल देखि विगतका अधिनायकवाद विरुद्धका कैयौमोर्चाहरु स्मरण हुन्छ । सैयौ क्रान्तिकारी योद्धाहरुको स्मरण हुन्छ । राम, लक्ष्मण, लिला, ठगी, श्यामसुन्दर लगायतका कैयौ वहादुरहरुले निर्माण गरेको विरताको गाथा हो । ने.वी. संघ सहिदहरुको वलिदानलाई स्मरण गर्दै, विर पूर्खाहरुको सघर्षको स्मरण गर्दा संगठनको वृहत्तर हितकालागि हाम्रो होइन राम्रो मान्छेको खोजी हुन आजको आवश्यकता हो । हाम्रो सामु कयौ प्रश्नहरु तेस्रीएका छन्। तर हामी अनुत्तरीत छौ । नेपाल विद्यार्थी संघले सोचे जस्तो ढंगले गती प्रदान गर्न सकीरहको छैन । समयमा अधिवेशन हुदैन । जील्लामा संगठन छैन । जील्लाका प्राय नेतृत्वहरु स्कुल र क्याम्पसमा संगठन गर्न छोडेर राजधानीमा सयर गर्न मस्त छन्। नेताहरुको चाकडी गर्न व्यस्त छन्। गाउँमा संगठन छैन । विद्यालय संगठन विहीन छ । क्याम्पस संगठन विहीन छ । जील्लाको कार्य समिति चलायमान छैन । यी सबै गतल प्रवृतिका विरुद्ध मूख खोलेर वोल्न सक्ने आँट पनि कसैसँग छैन । न त समिक्षा नै छ ।
तसर्थ यो सबै प्रवृतिका विरुद्ध संगठनको आमूल परिवर्तन गर्न र संगठनलाई गतिसीलता प्रादन गर्न मेरा प्रतीवद्धताहरु :
१. “विद्यार्थी मेरो साथी” अभियानलाई व्यापक बनाउनु पर्ने ।
२. विद्यालय, क्याम्पस र जील्लाको निरन्तर सम्पर्क र समन्वय हुनु पर्ने।
३. जहाँ स्कुल त्यहा ने.वी. संघ र जहाँ स्कुल त्यहा पूस्तकालय अभियानलाई व्यापक बनउनु पर्ने ।
४. हरेक ३÷३ महिनामा प्रदेश क्षेत्र अन्तर्गतको भेला तथा प्रशिक्षण गर्नुपर्ने ।
५. हरेक ६÷६ महिनामा वृहत जील्ला स्थरीय प्रशिक्षण र रणनितिक कार्यक्रम गर्ने ।
६. नेपाल विद्यार्थी संघको स्थापना दिवस, पार्टिको हरेक दिवंगत शिर्श व्यक्तित्वहरुको जन्म जयन्ती, स्मृती दिवस र देशमा मनाईने महत्पूर्ण दिवसहरु जस्तै प्रजातन्त्र दिवस, संविधान दिवस, वाल दिवस, नारीदिवस लगायतका महत्वपूर्ण दिनहरुलाई प्रत्येक मा.वी र क्याम्पसहरुमा मनाईने ।
जुनसुकै काम गर्न पनि एउटा दृढ विश्वास र अटल इच्छाशक्तिकोत आवस्यकता जरुर पर्छ नै । तर पनि यात्रा तय गर्न र गतिशिलता प्रदान गर्न हरहमेशा विद्यार्थी साथीहरुको सहयोगकोजरुरी छ ।
ने.वी. संघ जाजरकोटको अधिवेशन हुदै गर्दा ने.वी. संघ जाजरकोटका संस्थापक अध्यक्ष आदरणीय व्यत्तीत्व प्रकाश कार्की लाई स्मरण गर्नै पर्छ । त्यस्तैराजनैतिक यात्रा निरन्तर थियो । तर दैवले ठग्यो, दुस्मनले पाप चिताय, तत्कालीन विद्रोही माओवादीवाट क्रुरतापूर्वक हत्या गरिएका तत्कालीन गा.वि.स. अध्यक्ष लक्ष्मी प्रसाद आचार्य लगायत द्वन्द कालका दिवंगत सबै ज्ञात अज्ञात सहीदहरुलाई सम्झनु पर्छ अकालमै दुश्मनको क्रुर यातनाबाट हत्या गरीएका ने.वि.संघका पूर्व केन्द्रिय सदस्य एवं नेपाली कांग्रेस जाजरकोटका युवा नेता दिवंगत रविन्द्र विक्रम शाहा दाई हाम्रो मानस पटलमा जीवीत हुनुहुन्छ । सबै सबै जिल्ला स्तरका राजनैतीक व्यक्तित्वहरु, अग्रजहरु, ज्ञात, अज्ञात सहीदहरुकोकसम खाएर ६४ वटा मा.वी। ३ वटा क्याम्पस र ४ वटा सि.टी.ई.भि.टिइ वाट लगभग २५० को हराहारीमा पाल्नुहने सम्पूर्ण विद्यार्थी प्रतिनिधी साथिहरुले गतिशील र ससक्त ने.वी.संघ निर्माणका लागि परिवर्तनशिल र क्रान्तीकारी ससक्त र उर्जावान नेतृत्व छनौट गर्नुपर्नेछ । सबै विद्यार्थी प्रतिनिधी साथीहरु यो मोर्चामा लाम वद्ध भएर अगाडी बढ्नु आजको अनिवार्य आवश्यकता वनेको छ ।